ETshayina Eyenzelwe I-GCK(L) Idrowa yaMandla ombane aPhantsi Umzi-mveliso weSwitchgear Price-shengte abavelisi nababoneleli |Shengte
I-GCK (L) i-low-voltage extraction switchgear yenziwe kwiziko lokuhambisa amandla (i-PC) yekhabhinethi kunye neziko lokulawula imoto (MCC).
Ifanelekile kubasebenzisi bamandla afana nezityalo zamandla, izitishi, amashishini amashishini kunye nemigodi njenge-AC 50Hz, umbane ophezulu osebenzayo ukuya kwi-660V, ubuninzi bokusebenza ngoku ukuya kwi-3150A inkqubo yokusabalalisa, njengoko ukuhanjiswa kwamandla, ukulawulwa kweemoto kunye nokuguqulwa kombane wokuhambisa umbane.Ukusasazwa kunye nolawulo.
Isakhelo sekhabhinethi sidityaniswe yintsimbi ekhethekileyo enesimo esinamandla kunye nokuqina.
I-rack kunye neendawo zokufakela imingxuma zenziwe ngokwemodyuli ye-20mm.
Amalungu angaphakathi akhiwe ngamagalvanized, kwaye iindawo zangaphandle (ii-racks kunye nezitshixo zeengcango) zenziwe nge-phosphated kwaye zitshizwe nge-electrostatic epoxy powder.
Ubume bekhabhathi ye-PC feeder iyafana nekhabhinethi yokutya.Xa i-feeder yangoku i-630 A ~ 2000A, ikhabhinethi nganye inokuxhotyiswa ngeelophu ezimbini kwaye ifakwe phezulu nangaphantsi.
Kwikhabhinethi yeziko lamandla (i-PC), inxalenye ephezulu yindawo yebhasi ethe tye, kwaye inxalenye engezantsi yindlu ye-circuit breaker.I-breaker circuit inokuxhotyiswa nge-series ye-ME yesizwe, i-CW1 series kunye nokunye.Inokuthi ixhotyiswe nazo zonke iintlobo zezaphuli zesekethe eziveliswe phesheya, ezifana nezo ziveliswe yiNkampani ye-ABB, ngokuhambelana nothotho lwabathengi'needs.E, ii-M series breakers eziveliswe ngu-Schneider, kunye nee-breaker circuit ezikrelekrele.
Inkqubo yebhasi: Ibhasi yebhodi yekhabhathi ithatha inqanaba lesithathu lenkqubo yocingo lwesihlanu, ibhasi enye xa ireyithwe ngoku yebhasi ethe tye yi-1250 A okanye ngaphantsi, ibhasi ephindwe kabini xa ireyithiwe ngoku yebhasi yamanzi ingaphezulu kwe-1250 A, ibhasi ethe tyaba phakathi kwekhabhathi kunye nekhabhathi. yakhiwe ngeebhloko zokudibanisa, ibhasi ethe nkqo itywinwe ngepleyiti enezibilini kunye nepleyiti yeplexiglass ebonakalayo, kwaye i-baffle yangaphakathi isetyenziselwa ukunciphisa ukusasazwa kwe-arc.Ibhasi engathathi hlangothi ibekwe phambi kwekhabhinethi ephezulu, kwaye ibhasi yokukhusela (PE) ibekwe phantsi kwekhabhinethi, edibaniswa nebhodi yokwahlula kunye nomnyango womzimba wekhabhinethi, ngaloo ndlela iqinisekisa ukuqhubeka kwesiseko.
Ikhabhinethi kunye nekhabhinethi ye-drawer yezicwangciso ezisisigxina ezifana nembuyekezo ye-capacitance kunye ne-metering inesimo esifanayo sokubonakala kunye nesimo esifanayo sebhasi esithe tye, ngaloo ndlela iqinisekisa ukuba ikhabhinethi ye-drawer kunye nekhabhinethi ehleliweyo ingasetyenziswa ecaleni.
Kukho iifestile zokungenisa umoya zendalo phantsi nangaphezulu kwekhabhinethi yokutshintsha ngaphandle kokunciphisa izinga lokukhusela kwigobolondo.
Inqanaba lokhuseleko lweqokobhe lekhabhinethi yi-IP4.
Ulinganiso lwezihlandlo zokusebenza (Hz) 50
Ulinganiso lwamandla ombane osebenzayo (V) 380
Ixabiso lombane wokugquma (V) 660
Elona xesha liphezulu lokusebenza (A) Ibha yebhasi ethe tye 630-4000
Ibha yebhasi ethe nkqo 1600
Ubuninzi obulinganiswe ngexesha elifutshane lokumelana okwangoku Ibha yebhasi ethe tye 80kA (Ixabiso elisebenzayo)/1 s
Ibha yebhasi ethe nkqo 50kA (Ixabiso elisebenzayo)/1 s
Incopho yolwelwe kakhulu lokumelana okwangoku Ibha yebhasi ethe tye 170kA
Ibha yebhasi ethe nkqo 110 kA
I-Plug-in yeSekethe engundoqo (A) 200/400/630
IsiDibanisi seSekethe esiNcedisayo (A) 10
Ubuninzi boMbane uMzuzu oyi-1 (A) 2500
Ubuninzi bomthamo wokulawula injini (kW) 155
Inqanaba lokhuseleko IP30~IP40
Imo yokusebenza Yasekhaya, ikude, iyazenzekela
Ngaphambili: Ixabiso leWholesale leHXGN-12 AC High Voltage Switchgear Fixed Metal Closed Loop Switchgear-shengte
Okulandelayo: Factory Price GGD AC Low Voltage Distribution Cabinet Supplier-shengte